कुन अंगको कोठीले के संकेत गर्छ, ल हेर्नुस् यस्तो ठाउँमा कोठी हुनेले पाउँछन् धेरै मायाप्रेम (भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > कुन अंगको कोठीले के संकेत गर्छ, ल हेर्नुस् यस्तो ठाउँमा कोठी हुनेले पाउँछन् धेरै मायाप्रेम (भिडियो सहित)
कुन अंगको कोठीले के संकेत गर्छ, ल हेर्नुस् यस्तो ठाउँमा कोठी हुनेले पाउँछन् धेरै मायाप्रेम (भिडियो सहित)
admin February 22, 2020 जीवनशैली, रोचक	0
छालामा आउने दा ग तथा चिन्हलाई कोठी भनिन्छ । हाम्रो शरीरमा पाइने मेलानिन तत्व जम्मा भएपछि छालामा कालो, खैरो रंगको दा ग तथा चिन्ह देखा पर्न थाल्छन्, जसलाई कोठी भनिन्छ । कोठीहरु २० देखि ३० वर्षको उमेरसम्मका मानिसमा बढी देखा पर्नै गर्छन् । कोठी एउटै आकारको नभएर बिभिन्न प्रकारका हुन्छन् । कतिपय कोठीहरु समयसंगै हराउँदै जान्छन् भने कोही जादैनन् । कोठी आउँनु मानिसको वंशानुगत असर, हर्मोनमा हुने परिवर्तन र सूर्यको प्रकाशले पनि हो ।
कुनै गोरो बर्णकी महिलाको अनुहारमा कालो कोठी छ भने त्यसले सुन्दरतामा निखार ल्याइदिन्छ । कालो कोठी अनुहारमा भएमा कसैको नजर नलाग्ने विश्वास समेत रहिआएको छ । शरीरमा यस्ता कोठी हुनुका विभिन्न कारण हुन्छन् । तर कोठीको अर्थ भने आ-आफ्नै तरिकाले लगाउने गरिन्छ ।समुन्द्र शास्त्रमा उल्लेख भए अनुसार शरीरको कुन अंगमा भएको कोठीको अर्थ के हुन्छ भनेर चर्चा गरिएको छ ।
अभिनेत्री श्वेता बसुकाे बैबाहिक सम्बन्ध आखिर किन टिक्न सकेन एक बर्ष पनि? हेर्नुहाेस्
यी हुन पोखरेली पुरूष बेश्या, जस्लाइ खोज्दै केटीहरू नै आउने गर्छन् (भिडियो पनि हेर्नुस्)
वडा अध्यक्षकै अगाडि यसरी भयो राहुल र स्मिताको पुनर्मिलन, दुबै जना यति धेरै खुशी! (हेर्नुस् भिडियो)
घनिष्ट लभ गरेर बिहे गरेको श्रीमतीले यति ठुलो घात गरिन्, प्रेम कहानी सुनाउदै विदेशबाट रोए श्रीमान (भिडियो सहित)